चाडपर्वमा परदेश – Gulmiews
हिजो आज सामाजिक सञ्जाल विजयादशमीको शुभकामनाका शब्दले भरिएका छन् । विभिन्न अनलाईनदेखि पत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनहरुमा यसैले प्रथामिकता पाएको छ ।
सबैको प्रमुख समाचारमा यही देखिन्छ । समाचार हेर्दा लाग्छ नेपालीहरुका लागि योभन्दा ठूलो खुशी र हर्षको क्षण अरु छैन । लाग्छ, सबै नेपालीहरु रमाएका छन्, नाचेका छन्, गायका छन्, रमेका छन्, झुमेका छन् । नहोस पनि कसरी सत्यको विजयको रुपमा मनाइने यो पर्व हिन्दुहरुको सबैभन्दा ठूलो चाड हो ।
घर पुगेकाले गफ लगाउने होलान् । यो वर्षको दसैँ सबैभन्दा रमाईलो भो । तास खेलेर यति जितेँ, फलानाले यति दक्षिणा दियो, फलानो त गाउँकै कञ्जुस रैछ सबैभन्दा कम दक्षिणा दियो । सराय नाच हेर्न जाँदा आँखा जुध्यो, मोरी साह्रै राम्री रैछे, कस्की छोरी होली ? फेसबुकमा खोज्नसम्म खोजेँ । भेटाउनै सकिनँ । यति खोज्या भए त अप्सनल म्याथको प्रुफ पनि उती बेलै मिल्थ्यो होला ।
पीडा सबैका आआफ्ना छन् । कतिपयको फेसबुकमा ऊ नभेटिएर होला, कतिपयको सराय नाचमा उसलाई नदेखेर होला, कतिपयको दक्षिणा हराएर होला । कस्लाई के कस्लाई के पीडा सबैका । दसैँमा घर हुनेहरुका त यति पीडा भए घरभन्दा टाढा हुनेको कति पीडा होला । कल्पना गरौँ ?
घरभन्दा टाढा हुनेको पीडा बेग्लै छ । हुन त त्यो पीडा बाँडेर आखिर हुने त केही होइन तर पीडा बाँड्नु सान्दर्भिक लाग्यो । घरपरिवार बिनाको पहिलो चाडपर्व पीडादायी महसुस हुँदो रहेछ । कहिल्लै घर नछोडेको मान्छे सात समुन्द्र पारीको विरानो परदेशमा हुँदा साह्रै मन दुख्दो रहेछ । सबैभन्दा बढी घरपरिवारको सम्झना चाडपर्वको बेला आउँदो रहेछ ।
त्यही पनि नेपालमा दिन हुँदा यता अमेरिकामा रात हुने उता रात हुँदा यता दिन हुने यसले झन जटिल बनाउँदो रैछ । न तिज, न दसैँ, न त तिहार नै विदेशको जीवन । चाहे साउदी कतार होस् चाहे अमेरिका, जापान, कोरिया । परदेशीहरुको यो एउटै पीडा हो ।
सायद यही पीडालाई बुझेका होलान जीवन शर्माले………..
दिनरात सम्झना छ, घरगाउँको मलाई
सधैभरी वाँच्नुपर्यो, यो हृदय जलाई
आ मुटु मिचि बस्दै छु यहाँ, हास्ने खेल्ने कलिलो बैँसैमा
यसपाली त यस्तै भो आमा, अर्को साल आउने छु दशैँमा……
कतिबेला त एकमनले सोच्छ, यो सबै छोडेर भोली नै नेपाल फर्किउ, सबैजनासँग बसेर रमाईलो गरौं, नाँचौं । आखिर सबै नाचेकै छन् । रमाएकै छन् । म मात्र किन मन जलाएर बस्ने ? अहँ ! तर यो चाहनालाई बुवाको अर्तीले उठ्नै नसक्ने गरी थिँच्छ, छोरो भएर हिम्मत र धैर्य गर्न सकेन भने त्यो मान्छेको छोरो होइन पिॅडालुको शरह हो ।
त्यो चाहनालाई यही एउटै वाक्यले हावासम्म नछिर्ने गरी टालिदिन्छ । कस्को बाआमाले नै आफ्नो छोराका कुभलो सोच्छन् र ? परीक्षाहलमा कहिल्यै नपढेको प्रश्नको उत्तर लेख्दा पनि यति त गाह्रो हुन्नथ्यो तर यो मन बुझाउन त्यति गाह्रो हुने । तर बुझाउनै पर्ने ।
अघिल्ला वर्षका दिनहरु सम्झिंदै अर्को वर्षको अर्को वर्षको कल्पनामा……………..
चर्खे पिंङ घुम्दै होला देउरालीको माथी
टिका थाप्न आए होलान सबै संगीसाथी
लाए होलान्, सबैले आज टिका माथी जमरा केशैमा
अर्को साल आउने छु दसैँमा…………….
हुन त विदेशमा पनि चाडपर्व नमनाउने होइन् । नेपालीहरुको बाहुल्य भएका धेरैजसो ठाउँमा नेपाली मन्दिरहरु छन् । घरपरिवारबाट टाढा हुँदाको पीडा मेटाउने प्रयास धेरैले मन्दिर गएर साथी भाइ भेला भएर गर्छन् । तर यसले पनि त्यो पीडालाई वीसको उन्नाईस बनाउँदैन ।
आफ्नै गाडीमा हिडेपनि, चाहेजति पैसा कमाएपनि, भएभरको सुखसुविधा पाएपनि त्यो त्यो खुशी पाईंदैन । हरेक परिस्थिति आफू अनुकुल त हुँदैन यो धुव्र सत्य कुरा हो । प्रतिकुल परिस्थितिलाई अनुकुल बनाउन सक्नुमा नै सफलता लुकेको हुन्छ । यही कुरालाई मनन गरी अगाडी बढ्ने प्रण गरौं ।
अर्थशास्त्रको मान्यता जस्तै गरी एउटा पक्षलाई यथावत राखी अन्य पक्षलाई हेर्ने हो भने अहिलेको दसैँ नेपालीहरुको लागि अत्यन्तै हर्षउल्लासपूर्ण छ । किनकि लामो संघर्षपछि नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेको छ । संविधानको स्वाद दसैँमा मिसाएर मनाउँदा बेग्लै आनन्द हुन्छ होला ।
अन्त्यमा, विजयादशमीको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरुको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना सहित सम्पूर्णमा विजयादशमीको हार्दिक शुभकामना ।